ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ (၅. ၆. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(က)-လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ တန့်အယ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ လယ်ယာမြေများ အပြည့်အဝစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရေစီးရေလာအားကောင်းသည်‌့ နမ့်ပွန်ချောင်းပေါ်တွင် ဖိုင်လုံဆည်နှင့် ကုန်းကျောင်းဆည်တို့အား တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ခ)-ခိုင်းနွား၊ နို့စားနွား၊ အသားစားနွားများမွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-လက်ပံတန်းမြို့နယ် ဇီးဖြူကုန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံမြေ ၆.၃၃၆ ဧကအနက်မှ စိုက်ပျိုးရေးဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ၁၉၇၈-၁၉၇၉ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက ရယူခဲ့သော ၂.၁၉၉ ဧကအား ဆေးရုံမြေအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိသိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-ကြီးအုံကြီးဝနှင်‌့ မုန်းတမံရေဝပ်ဧရိယာ ရေကန်ပြင်တွင် ရေချိုငါးစီးပွားဖြစ် မွေးမြူရေးနှင့် သဘာဝ ငါးမွေးမြူရေးသုတေသနစခန်း ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-စလင်း-စေတုတ္တရာကားလမ်းမပေါ်ရှိ MPT ဖုန်းတိုင်များ၊ ဖုန်းကြိုးများနှင့် တယ်လီဖုန်း Connection Box များမြေပြင်ပေါ်ကျနေခြင်းများကြောင့် MPT ဖုန်းလိုင်းများ မကြာခဏပျက်နေမှုအား မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-သံဖြူဇရပ်မြို့ အမှတ်(၃) သုခကာရီရိပ်သာ၏ မျက်နှာစာတွင် ပိတ်ကာနေသော မီးရထားနှင့် ကားလမ်းခွဲတံခါးစောင့်၏ သစ်သားတဲကို အခြားလွတ်ကင်းရာ မီးရထားမြေသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဇ)-ကျွန်းစုမြို့နယ်ဆိပ်ကမ်းရှိ ဆိပ်ခံတံတားနှင်‌့ဘောတံတား (Jetty) အကြား ခရီးသွားပြည်သူများ အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက် တလင်းပေါင်းကူးတံတားအား အသေးစားနှစ်စင်း သို့မဟုတ် ကြားခံသံမဏိဆိပ်ခံတစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဈ)-ပြည်တွင်းသို့ မော်တော်ကားများတင်သွင်းရာတွင် ကောက်ခံနေသောအခွန်မျိုးစုံအား ဖြေလျှော့ပေးခြင်း၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တို့အား ယာဉ်ရပ်နားခ၊ လမ်းအသုံးပြုခတို့ကိုတိုးမြှင့်ကောက်ခံပြီး ဥပဒေနှင့်မညီပါက အရေးယူခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဋ)-မက်မန်းမြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(မက်မန်း)တွင် (၁၀၀x ၃၀)ပေနှစ်ထပ် စာသင်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဌ)-ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဆရာဆရာမ များကို အခြားသော အ.ထ.က ကျောင်းများကဲ့သို့ ခွဲဝေ(၁၂)ဦးနှင့်အညီ အမြန်ဆုံးခန့်ထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဍ)-မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ဟောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားယုန့်ကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အား လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသစ်ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ဎ)-ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးတွင် ဒေသသင်ရိုးရေးဆွဲနိုင်ရန် တိကျသည့်မူဝါဒချမှတ်ပေးခြင်း၊ ပညာရှင်များ၊ ဒေသခံများနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် စာအုပ်ရိုက်နှိပ်နိုင်ရန်အတွက် မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကိုသိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန
(ဏ)-ဘုတ်ပြင်းမြို့ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင် ဥပဓိရုပ်မကောင်းတော့သည်‌့ နဝရက်(ခန်းမ) အဆောက်အဦနေရာတွင်(၁၅၀x ၃၀x ၂၂)ပေ အရွယ်အစားရှိ စံကိုက်(၂)ထပ် ပင်မကျောင်း ဆောင်တစ်ဆောင် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း